Izinkondlo ngoFebruwari 23 - i-SMS emfushane yama-amadoda, abafana, abantwana - bayathokozisa emavesini on Defender of the Fatherland Day
Okunye Amaholide Februwari 23
Izinkondlo ngoFebhuwari 23: ezimfushane futhi zidelele izingane namadoda - I-SMS enhle futhi ehlekisayo ihalalisela. Izinkondlo ezimfushane zikaFebhuwari 23 zabafana abavela emantombazaneni esikoleni nasenkulisa
NgoFebhuwari 23, uSuku Lomvikeli Wezwe, bonke abantu baseRussia balindele ukuhalalisela emkhatsini wabo, izihlobo nabantwana. Namuhla, bambalwa abantu abakhumbula umlando weholide - cishe ikhulu leminyaka lidlule kusukela ngosuku lokuvunyelwa kwalo. Usuku lwe-Red Army (futhi ekuqaleni lwazinikezelwa iholidi) lugubha njengosuku lwempi, kodwa kamuva umkhosi waqala ukugubha bonke abantu. Namuhla akunandaba ukuthi insizwa noma ubaba ukhonza ebuthweni noma ngasolwandle, kungakhathaliseki ukuthi uhlangene nesezempi. NgoFebhuwari 23 usuku lwamadoda ethu abathandekayo. Bahalalisiwe ezikoleni, emsebenzini, ngisho nasezinkulisa. Abamele abasha, abancane nabaseminyakeni yobudala bobulili obunamandla banikezwa izinkondlo ngoFebhuwari 23 esifushane futhi eside, bathumela i-SMS yokuhalalisela, banikeza amakhadikhadi ahlekisayo. On Defender of the Dayland Day, amantombazane ahlela itafula "elimnandi" kulabo ofunda nabo, ehalalisela bonke abafana bekilasi. Emakhaya, wonke umkhaya ulungele ukuhalalisela upapa, umkhulu, abafowabo, amadodana ... lonke elaseRussia ligubha usuku lwe-Defender of the Fatherland Day!
Izinkondlo ezimfushane zezingane ngoFebhuwari 23 - Siyakuhalalisela kubafana benkulisa e-Defender of the Fatherland Day
Njalo ngonyaka, emva nje kwamaholide namaholide omnyaka omusha, ukulungiswa koSuku loMvikeli we-Fatherland kuqala ezinkulisa. Kuze kube ngoFebhuwari, ngo-23, nokho inyanga yonke - kumantombazane ngamaqembu kusadingeka ukuba nesikhathi sokufunda amavesi amancane kubafana. Ngokuvamile, uthisha ukhetha amavesi osukwini lwamadoda, kodwa abazali ngokwabo bangamema izingane ukuba bafunde ukuhalalisela abancane abafana. Izibonelo ze-quatrains yokubingelela ngeke uthole kuphela ezincwadini zezingane, kodwa futhi kuleli khasi. Ibutho lethu lokuzalwa elithandekayo ngoFebhuwari. Inkazimulo kuye, engenakunqotshwa! Inkazimulo emhlabeni emhlabeni!
Izwe lethu laseMelika licebile, Asifuni omunye umuntu, Kodwa izwe lethu, bafana, Asiyikunika noma ubani.
Ngiyashesha ukuhalalisela wena Happy Army kanye Navy Day Day! Ukuvikelwa kwe-Motherland ukukhonza - Umsebenzi omuhle!
Amahlombe amahlombe abomvu, umfaniswano omusha weBrith. Umphathi omusha uhambahamba eMoscow. Ukuziqhenya kwakhe kuPhezu kugcwele. Usuku lwabavikeli babo lugujwa yizwe.
Bonke bangayidlala kanjani ukuzingela: Petya yiyona eyinhloko ngaphezu kwesondlo, uSenya uyinyoka, inembile kakhulu, iSanitary Worker nguSvetka. U-Tanya uyisibhamu esinamandla, iPharadesi nomsakazo - opharetha wenethiwekhi. ULyonya ungumshayeli wezindiza, i-Pasha iyisibhamu somshini esheshayo. Asiyidlali ngezempi - Ngakho-ke sivikele uMama wethu!
Izinkondlo ezithandekayo zamadoda ngoFebhuwari 23 kuya kuLusuku loMvikeli Wezwe - Ukwazisa okuncinyane kumfowethu nomngane wami
Ukulungiselela ukuhalalisela nezipho zeSuku likaFebruwari 23, ukuhleka kwamantombazane - ukumangala kufanele kumjabulise indoda, ngaphandle kwalokho ngeke uthole isipho esihle ngoMashi 8. Omunye, mhlawumbe, uzama ukujabulisa abazalwane nabangani njengaleyo futhi becabanga, kodwa, nokho, iningi labameli bezocansi elihle balungiselela izipho amadoda ngobuqotho, ngenhliziyo yonke. Ngakusasa ngoFebruwari 23, ukunikeza isimanga kumuntu owenza umkhosi, ungakhohlwa ukumfundela ama-quatrains amasha okuthokoza, okunye okuzokuthola kuleli khasi. Vumela impilo ibe epholile empilweni yakho. Imali yangaphandle ixosha ephaketheni lakho, Ukuze ungadingi lutho, Futhi ujabulele ukuphila ngaphandle kokucindezeleka. Emva kwakho konke, uyakufanelekela, sizobona. Mfowethu, sihalalisela nge-23!
Kusukela ngoFebruwari 23 Siyakuhalalisela, mfowethu, wena! Isiqine, isibindi, sibe nesibindi, kodwa kunzima kakhulu indlela! Ngikholelwa ukuthi uzothola wena Futhi uzothatha okwakho futhi! Amaphupho akho azogcwaliseka. Ngiyazi, ungenza noma yini! *** Ngineminyaka engamashumi amabili nantathu kaFebhuwari Siyakuhalalisela, mngane wami, manje wena Futhi ngifisa ukunqoba kuphela, Live pripeyavachi, ngaphandle kwezinkinga! Inhlanhla iyoba nawe, Futhi ekhaya - injabulo nokuthula. Futhi wonke amaphupho mawagcwaliseke, ngoba ufanelwe!
Amavesi amancane afana noFebhuwari 23 kulabo ofunda nabo ekilasini abanegama lezinkondlo kubafana
Usuku lomvikeli we-Fatherland, yiqiniso, liholide elibi kakhulu, elibhekisela ngaphezu kwakho konke ebuthweni, ukuvikela amaMelandland, amasosha kanye nezikhulu zethu. Kodwa-ke, ehalalisela abafana esikoleni, amantombazane akudingeki afunde izinkondlo ezinzima kakhulu mayelana nokuxhashazwa kwamasosha okungenakufa. Kuyoba okuthakazelisa kakhulu ukubamba ikhonsathi ye-gay esikoleni, lapho amantombazane azokhombisa khona amakhono abo okufundela abaculi, abadlali, abafundi. Abafana bathanda "igama" amakhadi ahlekisayo nezinkondlo ezinikezelwe "uMichael", "Vladislav", "Nicholas", njll. Zinganikezwa ekupheleni kwekhonsathi yemikhosi. U-Anatoly Tolya, eholidini labo bonke abantu, ngizokuthi ungumuntu onjalo - Wena ungumuntu omangalisayo, Ngami, empeleni, kangcono kunanoma ubani. Ngifuna ukufisa namuhla, Ukuze ungacabangi ukulahlekelwa yinhliziyo. Uhlala unenjabulo kunabo bonke, Futhi ukhohlwa kuze kube phakade ngokubi!
Igor Igor, ngiyakuhalalisela! Ngifisa yonke imiphefumulo yami, Ngithembeke nami ngimi Futhi ungalokothi ushintshe. Wena-okungcono kakhulu emhlabeni, Khumbula, othandekayo, ngakho! Kwangathi unenhlanhla empilweni, Injabulo inkulu!
Artem Uhle kakhulu futhi uhlukile kuwo wonke umuntu: Ngoba yiyiphi isihloko, i-Artemy, i-Artem, ngesikhathi esifanayo ngaso sonke isikhathi iphumelela futhi injabulo uma unabo abathandekayo bakho ndawonye! Ngakho makube khona, naphakade! Amaphupho vumela iqiniso lakho libe yilo, Izinhlanhla mazize zize, Futhi zonke izifiso zami ziyogcwaliseka!
Amavesi amfushane ku-SMS ngamadoda ngoFebhuwari 23 - Funa ukuhalalisela okufushane ku-Defender of the Fatherland Day
NgoFebhuwari 23, wonke amantombazane, amantombazane nabesifazane bashesha ukuhalalisela abafana, abafana namadoda ku-Day Defender of the Fatherland. Yiqiniso, ukukhuluma amazwi anomusa kubesifazane akudingeki ukuba nesikhathi esanele. Kulokhu, "ukusindisa" kwangempela kuyoba umyalezo omfushane wefoni - i-SMS. Ungathumela i-SMS ngevesi kubangane bakho nezihlobo noma wenze ngisho nezindaba ezincane zemikhosi. Umvikeli wezwe, indodana ye-Motherland, ungachithi amandla akho, Ungalandeli i-bayonet engenalutho, Phila ube nento okumele uyikhumbule!
Ngomhlaka-23 wesithathu kaFebhuwari! Ngosuku oluhle kakhulu emhlabeni! Bayazi ukuthi bangabantu abadala, bayazi ukuthi bangabantwana! Ngifisa wena injabulo, bantwana! Vumela izinhlelo zigcwaliseke! Futhi izipho zeholide zizokhunjulwa kuze kube phakade!
Ngiyakuhalalisela ngosuku lwempi yethu, Nakuba ungakwazi ukuvikela noma ubani - Kodwa uthanda okusanhlamvu kwasekuseni, Ngakho uqonda ulimi lwesosha!
Izinkondlo ezimfushane zeholidi ngoFebhuwari 23 kubafana bamantombazane ekilasini - Amakhadi ahlekisayo e-Defender of the Fatherland Day
Kubonakala sengathi izolo kwakunguNyaka Omusha, uKhisimusi, amaholide asebusika, izihlahla zikaKhisimusi nolwandle lwama-mandarins, futhi lonke elaseRussia selilungele kakade ukugubha iholide lesibili elibusika elikhulu - i-Defender of the Fatherland Day. Yiqiniso, zonke izintombi zicabanga ngokunikeza umngane kusengaphambili. Abafunda nabo bangabumbana futhi balungiselele ikonsathi encane yokugubha abafana. Izinombolo zekhonsathi zingenziwa wena ngokwakho - izinkondlo, izingoma, ukudlala ngomdanso. Lapha uzothola izinkondlo ezimfishane ezimnandi kakhulu zeholidi ngoFebhuwari 23. Bhala phansi futhi ukhumbule - abafana bayothanda amahlaya-imilolotelo. Umfana ngamunye ekilasini anganikezwa iposikhadi, ngokusayina ngemigqa ehlekisayo esihlokweni esithi "Usuku Lwabantu".
Sifisa wonke amadoda ethu, isandla saso, esinamandla kakhulu, Awunaso isibhamu somnyama, Nama-cutts amathathu we-trotsch. Masibe yilowo nalowo olwa nesibindi Futhi uthando lomama luhlonishwa.
Namuhla, ngoFebhuwari 23, ngizoba yinkosikazi kuwe, ngizoba ngumusa, iwashi, Umkami ovikela umyeni wami.
Uma ungumuntu onesibindi, uzodabuka ngaphesheya kolwandle, Futhi awukwazi ukuthola amadoda angamaqhawe emhlabeni wonke, Yamukela isipho ngokushesha - uyathokozisa kithi: "Othandekayo wethu ungumvikeli" - sithi ngaphandle kokumbumbuluka! Ngokungangabazeki, i-Defender of the Fatherland Day yiholidi eliyingozi futhi lomphakathi. Kodwa-ke, lapho ukhetha amavesi amadoda nabesilisa ngoFebhuwari 23 bude noma bude, zama ukuhamba kude nenkulumo yokubonga kwakho. Amaklasi amantombazane anganikeza amakhadi ahlekisayo ngemibuliso yomuntu siqu. Abesifazane, behalalisela abayeni, obaba kanye nabafowenu, bakhululekile ukuhleka iholidi; ukunikeza amadoda abathandekayo inkondlo emfushane. Amasosha kanye nezikhulu ezikhonza e-Army noma ezingekho ekhaya, kubalulekile ukuthumela imiyalezo encane yefoni - i-SMS ngamavesi okuthokoza.
Imiklamo emihle ngoFebhuwari 23 ngezandla zabo ubaba - kusuka ephepheni, emabhokisini, emakhadibhodi - esikoleni, esincane kanye neqembu eliphakeme le-enkulisa - Amakilasi aphezulu nesithombe ngesinyathelo ngesinyathelo sokwenzela izenzi ngoFebhuwari 23
Izingoma zikaFebhuwari 23 ezinganeni zesikole ekusebenzeni kwamantombazane ekilasini - ividiyo nomculo nemibhalo yamaculo zanamuhla nezamasosha. Ukudansa ngoFebhuwari 23 eyenziwa ngamantombazane nabafana enkulisa nasezikoleni
Izinkondlo zikaFebhuwari 23, uPapa kanye noPapa ovela endodakazini yakhe kanye nezinkondlo zendodana - ezimfushane zoSuku lwe-Fatherland Defender sika kusukela kumzukulu wakhe nomzukulu wakhe
Ukuhalalisela ngokomthetho ngoFebhuwari 23: indlela yokuhalalisela umphathi kanye nozakwethu
Izithombe zeFebhuwari 23, 2018 - funny, funny futhi ezinhle
Isicelo seFebhuwari 23 kubantwana abaneminyaka engu-3-4 ubudala, ephakathi nendawo ephezulu ye-enkulisa, izithombe zesinyathelo ngesinyathelo. Indlela yokwenza isicelo sePapa ngoFebhuwari 23 esikoleni, ividiyo
I-Apple Pie Recipe
Yini ekubonweni kwamadoda kuyinto esemqoka othandweni
Ukugeza okunethezeka kwengane
Khetha umdlalo wengane esebenzayo
Ukholifulawa ubhakwa ngaphansi kwe-cheast-sweetly roast
Okufanele ukwenze uma izinkinga zenkumbulo zenzeka
Indlela yokufundisa kabusha umuntu ohlale ekhwele njalo?
Izimpawu, izimbangela, ukwelashwa nokuvimbela i-gingivitis
Indlela yokupheka inkukhu ekhulayo yenkukhu
Amathiphu awusizo wokusebenzisa nokugcina amazambane
Indlela umbala ekamelweni lokuthinta ngayo impilo yobunikazi yabalingani
Ngeke nginezingane, ngisinde kanjani?
Biography of actress uLyubov Orlova
Uma wena nomlingani wakho ningahambisani ne-horoscope